Somaliland: “Sabab Shirkaa (Saaxil) Keenaysa Ma Garanayo.. Wax Laga Shiraa Way Badan yihiin, Laakiin….” - Wargane News
Home Somali News Somaliland: “Sabab Shirkaa (Saaxil) Keenaysa Ma Garanayo.. Wax Laga Shiraa Way Badan...
Somaliland: “Sabab Shirkaa (Saaxil) Keenaysa Ma Garanayo.. Wax Laga Shiraa Way Badan yihiin, Laakiin….”
“Waxaan is-idhi Malaha Dad Baa Ku Shaqaysta Oo Dad Kaga cabsiiya Oo Masuuliyiinta Qaranka Kaga Cabsiiya Isku-shaandhayn Baa Jirta..” Afhayeenka Madaxtooyada
Hargeysa, 31 July, 2016(Ogaal):- Madaxtooyada Somaliland, ayaa shaaca ka qaadday inaanay cid aan Xukuumadda ahayn u oggoleyn qabashada iyo abaabulka Shir la xidhiidha arrimo siyaasadeed, isla markaana sababta ay u diiddan tahay shirka Baxarasaafka ay ku qabsan lahayd Beesha Ciise Muuse la xidhiidho arrimo ka baxsan kuwa Beelaha.
Aftahayeenka Madaxtooyada Somaliland Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Faahiye (Shamax) oo shalay waraysi siiyey Star TV, ayaa sheegay in waxyaabaha Beeluhu ka shiraa fara badan yihiin, hase-yeeshee, wixii siyaasad iyo heshiisyo ku saabsan ay Xukuumadda iyo Golayaasha dowladdu u xil-saaran yihiin. “In la isku dhufto hoggaanka dalka, Xukuumadda iyo reer Saaxil wax suuroobaya maaha. Ta hadalladu ka taagan yihiin ee ku saabsan Dekedda Berbera casriyeynteeda, horumarinteeda iyo hor-udhigiddeeda meel wanaagsan bay maraysaa.” Sidaa ayuu yidhi Shamax.
Waxa uu Afhayeenka Madaxtooyada Somaliland Cabdiraxmaan-Shamax oo hadalkiisa sii watay intaas ku daray; “Shirka waxaan qabaa maxaa baahi ah ee keenay Shirkaas (Shirka Beesha Saaxil)? Waxaan qabaa Shirkaas gebigisiiba inaan loo baahnayn. Haddii ay tahay dadka dilka xagga Garsoorka ayuu ka dhammaanayaa, haddii ay tahay Heshiiska Dekedda, wuxuu ku dhammaanayaa Golaha Wakiillada iyo DP World iyo dowladda oo si kama dambays ah u kala saxeexda.”
Afhayeen Shamax oo la weydiiyey sababta ay Xukuumaddu Culayska iyo Ciidammada ugu hayso Beesha Saaxil ee ay Shirka Baxarasaafka uga qabsoomaya ay u diiddan tahay, waxa uu ku jawaabay; “Baahida Shirkaasi keenaysa anigu ma garanayo, sideedabana Qarannimada iyo Beelbeelnimada, waxay dan wayni innoogu jirtaa inaynu si weyn oo ballaadhan oo waddaninnimo ah u fikirno, oo Qarannimada ku soconno, dadka la addoonsan maayo, lana cadaadin maayo, dadkii waddanka lahaa weeye, qaybtooday ka yihiin, saamigooday leeyihiin, wax kastay wax ka yihiin, calankay leeyihiin, ciidda ayey leeyihiin. Markaa, wax laga shiraa way badan tahay. Laakiin, xagga siyaasadda Xukuumadda ayaa Qarannimada iyo dowladnimada innoo qaabbilsan.”
Geesta kale, Afhayeenka Madaxweynuhu Cabdiraxmaan-Shamax oo ka jawaabayey su’aal laga weydiiyey hadal-hayn beryahan badnayn oo la xidhiidha isku-shaandhayn la sheegay in Madaxweyne Siilaanyo samaynayo, waxa uu yidhi; “Wakhti labada Toddobaad ee soo socda ah ayaan isku shaandhayn samaynayaa Madaxweynuhu ma yidhaahdo, way u asturan tahay, isaga ayuun baa og, aniguna haddii aan ahay Afhayeenka markuu shaqadaa guto ee uu hawshaa isagu guto, ayuun bay na soo gaadhaa. Intaan Afhayeenka ahaa iyo in ka horreysay-ba, mar walba waxaan maqli jiray isku-shaandhayn baa jirta, markaa waxaan is-idhi isku-shaandhayn baa jirtada.”
“Markaa, waxaan is-idhi malaha dad baa ku shaqaysta oo dad kaga cabsiiya oo Masuuliyiinta Qaranka kaga cabsiiya Isku-shaandhayn baa jirta, wax ugu jira ma garanayee oo waxaas baa ugu jira ma odhan karee. Laakiin, waxaan anigu aan ogahay oo aan odhan karo Madaxweynuhu maalintaas buu isku-shaandhayn soo wadaa ma jirto.” Sidaa ayuu yidhi Afhayeenka Madaxtooyada Somaliland.
Somaliland: Geedole meets Private sector Educationists
Somaliland: Wasiir Cadami oo ka Hadlay Ahmiyadda ay Xukuumaddu Siisay Doorashadda Madaxtooyada
Somaliland: “Kooxda Halkan Fadhidaa Waa Raggii Madaxweyne Siilaanyo Dabada Hayay,Ee Cayda Iyo Dhibta Ku Hayay,Waa Alle Mahadii Kol Haddii Ay Mabda’aygii Qaateen,Iyagoon Kiniin Cunin Oo Ay Kulmiye Iigu Yimaadeen”.
Somaliland: Madaxwayne Siilaanyo Oo La Sheegay Inuu Ganafka Ku Dhuftay Soo Jeedin Loola Tagay Oo Ah In Golaha Guurtidu U Samayso Muddo Kordhin Labaad
War Deg Deg Ah: Khilaafka Xisbiga Waddani Iyo Siyaasi Miisan Culus Oo Al-Baabada Ka Booday Kuna Biiraye Xisbiga Kulmiye Balse Waa Kuma?